गाई र घोडा जस्ता अन्य जनावर्हरु के उठि उठि सुत्न सक्छन? के तपाईंलाई थाहा छ? जन्नुहोस | Khabar Sadan खबर सदन
Home अन्य गाई र घोडा जस्ता अन्य जनावर्हरु के उठि उठि सुत्न सक्छन? के...
गाई र घोडा जस्ता अन्य जनावर्हरु के उठि उठि सुत्न सक्छन? के तपाईंलाई थाहा छ? जन्नुहोस
तपाईंले सुन्नुभएको छ होला कि गाई र घोडा जस्ता ठुलो जनावरहरू उठेर निदाउँछन् – तर जब यो गहिरो निद्रामा आउँछ, यो सत्य हुँदैन! गाईहरु सुन्न सक्छन् र आफ्नो खुट्टा मा हल्का सुत्न सक्छन्, जब निद्रा को लागी आउँछ, तिनीहरू हाम्रो बानी जस्तै सुत्छन। यो केवल गाईको लागि मात्र होईन, तर प्रायः अन्य ठूला शाकाहारीहरू जस्तै – घोडा, बाइसन, गैंडा, र अधिक।
जब तिनीहरू उभिएर गहिरो निद्रामा नपर्न सक्छन्, जो कोही जसले कहिले बैठकमा वा रेल वा अन्य स्थानमा अलिकता बन्द आँखा प्राप्त गर्ने कोसिस गरेको छ, जसलाई बसिरहेको वा उभिन आवश्यक छ, तपाईं सायद उनीहरू सोच्दै हुनुहुन्छ कि उनीहरूले यो कसरी गर्छन्। पेन्सल्भेनिया युनिभर्सिटी अफ वेटरनरी मेडिसिन विश्वविद्यालयका एमी जॉनसन बताउँछिन्: “घोडाको खुट्टा र अन्य जनावरहरू लाई“ स्टे उपकरण ”भनेर चिनिन्छ।
तिनीहरूको अंगमा टन्डन र लिगामेन्ट हुन्छ जसले जनावरलाई न्यूनतम मांसपेशीमा खडा रहन दिन्छ। र यसैले उनीहरूलाई लामो अवधिको लागि खडा रहन शक्ति दिन्छ र पोइलो पनि। ” यो सिद्धान्त हो कि यो क्षमता विकास हो – सम्भावित सिकारलाई खतराको लागि आँखा बाहिर राख्न मद्दतको लागि डिजाइन गरिएको हो। अर्को विकासवादी फाइदा? तिनीहरूलाई दिनको ४ घण्टा मात्र निन्द्रा आवश्यक पर्दछ, मानव भन्दा उल्लेखनीय कम।
Previous articleखुकुलो भएकै दिन उपत्यकामा कोभिड संक्रमण बढ्यो, के अब फेरि पहिलाको जस्तै निषेधाज्ञा हुन्छ त?जन्नुहोस
Next articleपाथिभरा माताको दर्शन गरौ र आफ्नो भाग्य कस्तो छ हेरौ, आज – ०९ आषाढ २०७८ बुधवार को राशिफल हेर्नुहोस